प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज नै गायब (भिडियोसहित) | Kendrabindu Nepal Online News
२८ चैत्र २०७६, शुक्रबार १९:२४
बिहिबार दिउँसो एक्कासी उपत्यकामा रहेका सर्व साधारणलाई गाउँ जान दिने समाचार सार्वजनिक भयो । कतिपय सञ्चार माध्यमले त यात्रुलाई गाउँ लैजाने मोडालिटीको विषयमा उच्चस्तरमा छलफल भइरहेको समेत समाचार प्रकाशित गरे ।
समाचार सार्वजनिक भएपछि कतिपयले संकटका बेला सरकारले ‘केटाकेटी पारा’ को निर्णय गरेको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका थिए । कतिपयले भने संकट बढ्ने संकेत पाएर लकडाउन लम्ब्याउन सरकारले यो उपाय अपनाएको भन्दै विश्लेषण गरिरहेका थिए । प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त सरकारको यो कदम सही नभएको भन्दै फेसबुकमै विरोध जनाए ।
समाचार सार्वजनिक भएको दुई घण्टा नबित्दै यस्तो कुनै निर्णय नभएको भन्दै अर्काे समाचार सार्वजनिक भयो । कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले फेसबुकमा विज्ञप्ति नै जारी गरे । पोखरेलले विज्ञप्ति नै जारी गरेर निर्णय नै भएको थिएन भनेपछि सञ्चारमाध्यमप्रति गालीको वर्षा हुनु स्वाभाविक नै थियो ।
सत्तारुढ दलका केही नेता कार्यकर्ताहरु पनि सञ्चारमाध्यमहरू हौवाको पछि लागेको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका थिए ।
यो सबै भइरहँदा पोखरेलले बिहिबार समितिको बैठक नै नबसेको र कुनै निर्णय नभएको दावी गरे । तर उनले साथीहरुबाट यस सम्बन्धी प्रस्ताव आएको भने स्वीकार गरे । त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले विशेषगरी लामो दुरीका सर्वसाधारणलाई बाहिर जान दिने तयारी भइरहेको बताइसकेका थिए । उनले यात्रुहरुलाई कसरी सुरक्षितरुपले लैजाने भन्ने विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यावसायीहरुसँग छलफल गरिरहेको समेत बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको (भेरिफाइड) आधिकारिक फेसबुक पेजमै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको उल्लेख थियो । फेसबुकको समाचारको आधिकारिताबारे वादविवाद भइरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने पहिलो स्टाटर एडिट गर्दै स्थानीय तथा प्रदेश स्तरका सरकारहरूले मान्यता नदिएकाले निर्णय फिर्ता लिइएको उल्लेख गरे ।
आफ्नो गल्ती भएको पुष्टि भइसकेपछि पनि फेरि गल्ती गर्न पछि हटेन सरकार । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज नै गायव पारिएको छ । उक्त फेसबुक पेज हाइड गरियो, प्राइभेट गरियो अथवा डिलिट गरियो यस विषयमा सचिवालयले केही भनेको छैन । अनौठो त यो छ कि सबैकुरा छताछुल्ल पोखिसकेपछि पेज गायव पार्नुको अर्थ के हो ?
आधिकारिक फेसबुक, पेज नै गायब, प्रधानमन्त्री कार्यालयको
Prevकोरोनाबारे चेतना जगाउन रौतहट प्रशासनको नौलो अभियान (भिडियोसहित)
भोकमरीको अवस्था आउन सक्ने भन्दै कृषिमन्त्रीद्वारा स्थानीय सरकारलाई पत्राचार (भिडियोसहित)Next
प्रधानमन्त्री कार्यालयको फेसबुक पेज नै डिलिट